In 1973 we were still not only citizens but Original Ethnic Nationalities but why now removed? | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« 8 Stages of Genocide slowly unfolding in Rakhine and Myanmar
Famous Myanmar Muslims: Kyar Ba Nyein and Shwe Ba »
In 1973 we were still not only citizens but Original Ethnic Nationalities but why now removed?
ဖြေနိုင်သူများနှင့် ဖြေရဲသူများ ဖြေကြပါ
၁။ မူလဘူတက မြန်မာပြည်မှာ တိုင်းရင်းသား (၁၄၄)မျိုးရှိတာကို သိပါသလား။
၂။ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးစောမောင်က (၁၃၅)ဖြစ်စေသတည်းလို့ မာရှယ်လောနှင့် ဖန်ဆင်းလိုက်တာနှင့် (၁၃၅)မျိုး ဖြစ်သွားရတာကို သိပါသလား။
၃။ မကြာခင်က တိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၀၁)မျိုးသာ ရှိတယ်ဆိုကာ ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်က ဇိုမီးကို တိုင်းရင်းသား မဟုတ်ဘူးဆိုပြီး ဇိုမီးတိုင်းရင်းသား တစ်အုပ်စုလုံးကို အရှင်လတ်လတ် ဖျောက်ဖျက်ပစ်လိုက်တာကို သိပါသလား။
၄။ ဇိုမီးတွေက ကန့်ကွက်သဖြင့် လူမိသွားပြီး ဥုံဖွ ဇိုမီးတိုင်းရင်းသား ပြန်ဖြစ်စေလို့ မိန့်ကြားလိုက်ရာ ဇိုမီးလူမျိုးများ ချက်ချင်း ငေါက်တောက်ထ အသက်ပြန်ရှင်လာရတာကို သိပါသလား။
၅။ မူလ (၁၄၄)မျိုးကို (၁၃၅)မျိုးလို့ သတ်မှတ်လိုက်တုန်းက အပယ်ခံလိုက်ရတဲ့ လူမျိုး(၉)မျိုးက ဘယ်ချောင်မှာ ငုတ်တုတ် ပျောက်သွားပါသလဲ။
၆။ တစ်ဖန် လူမျိုး(၁၃၅)မှ (၁၀၁)မျိုးသာဖြစ်စေလို့ ဦးသိန်းစိန်အစိုးရက မိန့်ဆိုလိုက်ပြန်တော့ နောက်ထပ် ပယ်လိုက်တဲ့ လူမျိုး (၃၄)မျိုးကိုကော ဘယ်ထောင့်မှာ လူမသိ သူမသိ သွားသတ်ပစ်လိုက်ပါသလဲ။
(တစ်ကယ်တော့ မျိုးဖြုတ်ခံ (Genocide) လိုက်တဲ့ ကာယကံရှင် မြန်မာတိုင်းရင်းသား (၃၄)မျိုးကတော့ သူတို့ကိုယ် သူတို့ ဘယ်တုန်းက ဘယ်လို အရှင်လတ်လတ် ပျောက်ကွယ်သွားပြီ ဆိုတာတောင် ယခုအထိ မသိရှာသေးပါဘူး။ လူဦးရေ သန်း(၆၀)လောက်ရဲ့ တိုင်းရင်းသား (၁၃၅)မျိုးမှာ သိန်းဂဏန်းသာရှိတဲ့ ချင်းလူမျိုးကို (၅၃)မျိုးခွဲဖြစ်အောင် ဗရဗွ ခွဲစိတ်ထားတဲ့အတွက် ချင်း၊ ကူကီး၊ ဇိုမီးစသည့် ကာယကံရှင်တွေကပင် မနှစ်သက်ကြပါ။ ညှိနှိုင်းခြင်းဖြင့် အလွယ်တစ်ကူ ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ တိုင်းရင်းသားစာရင်းကိုပင် မလိုအပ်ဘဲ တစ်ဖက်သတ် အာဏာသုံး လုပ်ဆောင်နေဆဲဖြစ်သည့် ဦးသိန်းစိန်အစိုးရ၏ တိုင်းရင်းသားများအပေါ် ထားရှိသော စေတနာမှန်ကို မေးခွန်းထုတ်စရာ ဖြစ်သည်။)
၇။ လူမျိုး (၁၄၄)ဖြစ်စေ၊ (၁၃၅)ဖြစ်စေ၊ (၁၀၁)မျိုးဖြစ်စေ တစ်ခါဘူးကမှ ကာယကံရှင် တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ဆန္ဒသဘောထားကို တောင်းဆို ညှိနှိုင်းခြင်း မရှိဘဲ အစိုးရဆိုသူတွေကသာ တစ်ဖက်သတ် မိမိထင်သလို သတ်မှတ်ခဲ့တာချည်း ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကော သိပါသလား။ တိုင်းပြည်ရဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် ဒီလောက်အရေးကြီးတဲ့ တိုင်းရင်းသားကိစ္စကို အစိုးရဆိုသူတွေက မိမိစိတ်ကြိုက် မှောက်ချည် လှန်ချည် လုပ်နေတာကို မှန်တယ်လို့ ထင်ပါသလား။ လုပ်ခွင့်ရှိတယ်လို့ ထင်ပါသလား။ လက်ခံပေးနိုင်ပါသလား။
၈။ ဦးနုက မဲရချင်လို့ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ ထောက်ပြပြီး ကန့်ကွက်ကြတယ်။ ကောင်းပါပြီ။ (ကျနော့အမြင်ကတော့ ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသား ဖြစ် မဖြစ်၊ နိုင်ငံသား ဖြစ် မဖြစ် အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားရေးရာကိစ္စအားလုံးကို အစိုးရနှင့် သမိုင်းပညာရှင်တွေ၊ တိုင်းရင်းသားပေါင်းစုံ နိုင်ငံရေး ခေါင်းဆောင်တွေပါတဲ့ ကော်မရှင် (သို့) ကွန်ဖရင့်တစ်ရပ်ကသာ ဖြေရှင်းသင့်တယ်လို့ ယုံကြည်တယ်။)
သို့သော် မြန်မာ့သမိုင်းမှာ တစ်ခါဘူးကမှ တိုင်းရင်းသား မဖြစ်ခဲ့တဲ့၊ ဒီမိုကရေစီအစိုးရ အဆက်ဆက်နှင့် ဦးနေဝင်းခေတ်တစ်လျှောက်လုံး နိုင်ငံခြားသားတွေသာ ဖြစ်တယ်လို့ တသမတ်တည်း သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ ကိုးကန့်ကို တရုပ်နဂါးကြောက်ပြီး ၁၉၉၀ နောက်ပိုင်းမှ တိုင်းရင်းသားအဖြစ် အာဏာစက်နှင့် သတ်မှတ်လိုက်တာကိုကော အမျိုးပျောက်မှာ စိုးကြောက်ပါတယ်ဆိုသူများက ဘယ်ချောင်မှာ အိပ်ပျော်နေဆဲဖြစ်လို့ မကန့်ကွက်ရပါသလဲ။
ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေးတွေအတွက် တိုက်ပွဲဝင်နေပါတယ်ဆိုတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ စာပေ ယဉ်ကျေးမှု ပညာရှင်များကကော စံနှစ်ခု(Double Standard) ကိုင်စွဲထားတာ လိပ်ပြာသန့်ပါရဲ့လား။
တရုပ်နဂါးကြောက်လို့ နှာများ စေးသွားတဲ့ ယုန်ကလေးများ ဖြစ်သွားရှာပြီလား။
ဖြေနိုင်သူများ၊ ဖြေရဲသူများ ဖြေကြပါ။
ဇူလိုင် (၄) ၂၀၁၂
Tags: Burma, Double standard, Human rights, Muslim, Rakhine people, Recreation, South Africa under apartheid, United States
This entry was posted on July 6, 2012 at 12:07 pm and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.
2 Responses to “In 1973 we were still not only citizens but Original Ethnic Nationalities but why now removed?”
July 7, 2012 at 3:20 am | Reply
Source U Aung Tin
ဖြေနိုင်သူများ ဖြေရဲသူများ ဖြေကြပါဆိုတဲ့ ကျနော့ဆောင်းပါးကို တုန့်ပြန်တဲ့ ဆရာ့စာကို အခြားတစ်နေရာမှ ရရှိပါတယ်။ ဆရာ့စာထဲမှာပါတဲ့ အချက်(၃)ချက်က ပြန်လည်ဆွေးနွေးဖို့လိုမယ် ထင်ပါတယ်။ ဆရာလို ပညာရှင်မျိုးက မေးတာကို မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင် ကျနော်က လျှောက်ညာနေသလို ဖြစ်သွားပါမယ်။
၁။ ဆရာက ကျနော်တင်ပြထားတဲ့ မြန်မာတိုင်းရင်းသား လူမျိုးစု(၁၄၄)မျိုးဆိုတာ ချဲ့ကားထားတာဖြစ်တယ်။ ဘယ်ကရသလဲ၊ အထောက်အထားပြပါလို့ ဆိုပါတယ်။
ဒီမေးခွန်းမျိုးကို ဆရာလို ထင်ရှားကျော်ကြားပြီး လေးစားထိုက်တဲ့ သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးက မေးလိုက်တယ်ဆိုတာ အင်မတန် အံ့သြဖွယ်ရာ ဖြစ်ရပါတယ်။ ထင်ရှားတဲ့ သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ဆရာက တစ်ကယ် မသိတာဆိုရင်တော့ သိပ်ဟန်ကျမယ် မထင်ပါဘူး။
မြန်မာတိုင်းရင်းသားလူမျိုး (၁၄၄) မျိုးစာရင်းကို ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်အစိုးရ ပြည်ထဲရေးနှင့် သာသနာရေး ဝန်ကြီးဌာန ပုံစံရေးသွင်းရန်ညွန်ကြားချက် (၉-၁၂-၁၉၇၂)ထုတ် လူမျိုးများစာရင်း စာမျက်နှာ (၄၃)တွင် အသေအချာတွေ့နိုင်ပါတယ်ဆရာ။ ဒီလောက်ဆိုရင် ဆရာလို သမိုင်းပညာရှင်တစ်ဦးအနေနှင့် အလွယ်ပြန်ရှာနိုင်မယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်။
၂။ ကိုးကန့် (တရုပ်လူမျိုးစစ်စစ်)တွေကို ဌာနေတိုင်းရင်းသားအဖြစ် အိန္ဒိယမှာမွေးတဲ့ မျက်နှာဖြူ ဗိုလ်မှူး C. M. Enriguez က ရေးထားတယ်လို့ ဆရာကိုးကားပါတယ်။ ပညာရှင်တွေပြောတိုင်း တိုင်းရင်းသားဖြစ်ရမယ်ဆိုရင် ရိုဟင်ဂျာတွေဟာ တိုင်းရင်းသားပါဆိုတဲ့ ပညာရှင်တွေလည်း ရှိပါတယ်ဆရာ။ ပိုပြီးရှုပ်ထွေးစေမဲ့ အဲဒီဖက်ကို ကျနော်တို့ မသွားချင်ပါဘူး။ ကျနော်ရေးခဲ့တာက မြန်မာအစိုးရ အဆက်ဆက်က တရုပ်တွေဖြစ်လို့ နိုင်ငံခြားသားပါဆိုပြီး ကိုးကန့်ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်မခံခဲ့တာကိုသာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်ပညာရှင် အကြောင်းမှ မပါပါဘူး။ အကယ်၍ နဝတ မတိုင်မီ မြန်မာအစိုးရတစ်ခုခုက ကိုးကန့်ကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် သတ်မှတ်ခဲ့တဲ့ အထောက်အထားရှိရင် ဆရာထောက်ပြပါ။
၃။ ဆရာက ”Now you can compare these peace-loving Kokang people with the aggressive, militant, rebellious and illegal immigrants of the North Arakan.” ရေးပါတယ်။
ရိုဟင်ဂျာတွေကို “Influx Virus” ဆိုတဲ့ အမည်တပ်ထားတဲ့ စာအုပ်ထဲမှာ ဆရာ့ဆောင်းပါး ရေးခဲ့တဲ့ကိစ္စကို ကျနော်နှင့် ဆရာ တယ်လီဖုန်းမှာ လွန်ခဲ့သော နှစ်နှစ်လောက်က ဆွေးနွေးခဲ့တာ ဆရာမှတ်မိမယ် ထင်ပါတယ်။ ရိုဟင်ဂျာကို တိုင်းရင်းသားအဖြစ် လက်ခံတာ၊ လက်မခံတာ အပထား၊ ခိုးဝင်လာသူတွေဖြစ်နေရင်တောင် လူသားတွေသာဖြစ်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေကို တိရစ္ဆာန်ထက် ပိုပြီးကြောက်ရွံ့ ရွံရှာစရာကောင်းတဲ့ ကပ်ရောဂါပိုးတစ်မျိုးလို့ ရက်ရက်စက်စက် နှိမ့်ချခေါ်ဝေါ်ထားတာမို့ ၄င်းစာအုပ်တွင် ပါဝင်ရေးသားသူ ပညာရှင်မှန်သမျှသည် လူမျိုးရေးအစွန်းရောက် (Rascist)တွေဖြစ်ကြောင်း အထုတ်အထည်နှင့် မိမိကိုယ်ကို လူသိရှင်ကြား ဝန်ခံထားတဲ့ စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။ ဆရာက ဒီလိုခေါင်းစဉ်တပ်တာကို သဘောမတူကြောင်း၊ ဆရာမသိဘဲ တပ်လိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ကျနော့ကို ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဆရာ့ကို Racist အဖြစ် ဝေဖန်သူတွေကို ကျနော်က ဆရာ့ပြောကြားချက်ကို ပြန်ပြောပြရင်း ဆရာဟာ အစွန်းရောက်သူ မဟုတ်ကြောင်း အမြဲကာကွယ်ခဲ့ပါတယ်။ သူတို့က ဆရာ့ကို မယုံပေမဲ့ ကျနော်က ယုံပါတယ်။
အခု ဆရာ့စာမှာ ဆရာက မြန်မာ့ရာဇဝင်မှာ လွတ်လပ်ရေးရကတည်းက ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာ မူးယစ်ဆေး ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချိမှုနှင့် မြန်မာ့လုံခြုံရေးကို အကြီးအကျယ်ခြိမ်းချောက်ခဲ့တဲ့ သောင်းကျန်းသူ ကိုးကန့်(အခုကာလကို မပြောလိုပါ)တွေ တစ်မျိုးလုံးက ငြိမ်းချမ်းရေးကို မြတ်နိုးသူတွေဖြစ်ပြီး ရခိုင်ပြည် မြောက်ပိုင်းက တရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူ(Illegal Immigrants) တစ်မျိုးနွယ်လုံးက ရိုင်းစိုင်းကြမ်းတမ်းသူများ (aggressive)၊ စစ်သွေးကြွများ (militant)၊ ဆူပူသောင်းကျန်းသူများ (rebellious)ဖြစ်တယ်လို့ လူသားမျိုးနွယ်နှင့် ချီပြီး တံဆိပ်ခတ် သတ်မှတ်လိုက်တာကို ဖတ်လိုက်ရတော့ ကျနော့အဖို့ အင်မတန် တွေးရခက်ကြီး ဖြစ်ရပါတယ်ဆရာ။
ဆရာဟာ တစ်ကယ်ဘဲ လူမျိုးရေးအစွန်းရောက်သူ(Rascist) ပညာရှင်တစ်ဦး ဖြစ်ပါသလား။
ဇူလိုင် (၆) ၂၀၁၂
To: 8888 Peoplepower
Sent: Friday, July 6, 2012 3:33:25 AM
Subject: [8888peoplepower] Fw: FYI
On Fri, Jul 6, 2012 at 4:26 PM, Aye Chan wrote:
Dear U Aung Tin:
How do you dare to challenge with these questions? I agree that the SLOC’s list of the ethnic group is actually not correct. It is clearly an exaggeration. However, it contains all the original nationalities of Burma. You exaggerated again to 144 ethnic groups. Let me know on which source materials do you rely for information?
According to C. M. Enriquez’s book, Races of Burma, Manager of Publication, Delhi, 1933, there are three ethno-linguistic family in Burma, namely Mon-Khamer, Tibeto-Burman and Tai-Chinese.
There are six ethnic groups in Mon-Khmer Group, sixteen in Tibeto-Burman and6in Tai-Chinese. Purposely he did not categorize the Dhanu, Inthar, Taungyoe and Tavoyan who speak different Burmese dialects as separate ethnicities.
Kuki, Lushai and Asho also speak different Chin dialect.
Zomi was not in extinct because Chin are there in Chin State. The Northern Chin like themselves to be called Zomi.
As you have said the Burmese government recognized the Kokang as nationality of Burma. But it was not because the military-backed government was afraid of the Chinese dragon. The Kokang were listed in the list of nationalities of Burma by the British. C. M. Enriquez writes:
“The Kokang Chinese population of Burma is largely fluctuating, but permanent Settlements occur in the Lashio area, notably of socalled “Kokang Chinese” east of Nam Hkam and Trans-Salween at Tawnnyo amd Malipa. Hereamilitary post is maintained in the dry season. The Kokang Chinese haveaMyoza or prince of their town. They and their retainers , called “ Lukling or Foster Children,” are well spoken of and might be recruited with advantage. They are hardy, diligent, friendly, hospitable people…. The Kokang Chinese are mule breeders.”
Now you can compare these peace-loving Kokang people with the aggressive, militant, rebellious and illegal immigrants of the North Arakan.”
July 12, 2012 at 5:44 am | Reply
thanks you ko aung tin